Vaovao - Ahoana no tokony hisafidianantsika tsara ireo mpanamboatra latina avo lenta
Ahoana no tokony hisafidianantsika tsara ireo mpanamboatra latina avo lenta
Ahoana no fomba tokony hisafidianantsika ireo mpamokatra latte CNC avo lenta
Ny loharanom-pahalalana mpamatsy kalitao avo indrindra amin'ny indostrian'ny fanodinana mekanika dia mifantoka amin'ny faritry ny renirano Pearl Delta sy ny Yangtze River Delta, izay vondron'ireo mpanamboatra lathe CNC dia vondrona iray tena lehibe koa. Ka ahoana ny fisafidianana marina ny mpamokatra fanodinana lathe CNC? Wally teknolojia hiresaka aminao momba ny:
Voalohany indrindra, alohan'ny hisafidianana ny ozinina fanodinana lathe CNC, dia tsy maintsy fantatsika fa ny mpanamboatra latte CNC avo lenta dia manana ireo toetra ireo, ahoana no fomba anaovana ny fenitra avo lenta?
1. Ireo mpanamboatra latina avo lenta dia tokony hijery ny sary sy ny kolontsain'ny orinasa aloha. Ny antony lehibe manasarotra ny famolavolana kolontsaina amin'ny indostrian'ny milina dia satria ratsy ny kalitaon'ny mpiasa amin'ny ankapobeny. Raha manana sary ivelany sy kolontsaina orinasa ny orinasam-panodinana CNC lathe dia mampiseho fa mitandrina tsara ny fitantanana orinasa ary manana fiofanana mpiasa sy fanangonan-karena kolontsaina tsara mampiavaka ny mpamatsy kalitao.
2. Ny fitaovana faharoa an'ny ozinina fanodinana latina avo lenta dia ny fitantanana 7S fototra. Raha ampitahaina amin'ny indostrian'ny elektronika, ny 7S amin'ny indostrian'ny fanodinana mekanika dia sarotra kokoa ny mampihatra. Raha ny fandrindrana sy ny fanitsiana 7S ao amin'ny atrikasa dia tena tsara, tsy maintsy manao asa tena tsara isika ao amin'ny fizarana faritra 7S, ny fametrahana fitaovana ary ny fanamarinana ny asa dia afaka mampihena ny vokatra misy lesoka maro ny fanaterana, ho tonga ara-potoana kokoa ny fandefasana.
3. Hamarino ny fampiharana amin'ny antsipiriany ny rafitra fitantanana ny orinasa, ny fizotran'ny fanodinana teny nalaina, ny fizotran'ny fandefasana baiko, ny fizotran'ny fampandrosoana, ny fizotran'ny kalitao ary ny fizotran'ny rafitra. Raha feno ny fepetra etsy ambony, dia aseho fa ny fiasan'ny orinasa dia tsara ihany koa ary manana ny toetran'ny orinasa mpanamboatra latina avo lenta.
Raha atao teny iray, ireo mpanamboatra latina CNC tena tsara dia manana endrika ivelany sy ekipa fitantanana matotra, ary ny fiasa maharitra dia namorona atmosfera kolontsaina tsara. Ny fahitana ny haitao an'ny volley masera dia ny fanampiana ny milina marina afaka manampy ny fanavaozana ny teknolojia. Manantena izahay fa ho lasa processeur miavaka eo amin'ny sehatry ny fikirakirana mekanika ary handray anjara amin'ny fanavaozana sy teknolojia an'i Shina.